UKhenketho lwase-Uganda ngoku Lujolise kwii-CEO kwi-Domestic Incentive Travel Drive
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseUganda » UKhenketho lwase-Uganda ngoku Lujolise kwii-CEO kwi-Domestic Incentive Travel Drive
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zaseUganda
Isidlo sakusasa se-CEO saseUganda
Umbutho wezoKhenketho wase-Uganda (i-UTA) kunye neSiseko seCandelo laBucala e-Uganda (PSFU) uququzelele isidlo sakusasa se-CEO kunye nomboniso ngoLwesihlanu, nge-22 ka-Okthobha ngo-2021, eKampala Sheraton Hotel.
Lo msitho ububanjwe phantsi kweNkqubo yokuBuyisa uQoqosho kunye neNkqubo yokuPhendula ngoQoqo kwi-COVID-19 (CERRRP).
Oku bekukumzamo wokukhuthaza uhambo lwenkuthazo kwicandelo leshishini lasekhaya elijolise kwiintloko zeenkampani zabucala nekarhulumente kunye namaqumrhu.
Lo msitho wavulwa nguNobhala oyiNtloko (PS) weSebe lezoKhenketho kwiZilwanyana zaseNdle kunye nezinto zakudala (MTWA) uDoreen Katusiime.
Ethetha namaGosa aLawulayo aziiNtloko kunye nababonisi ababekhona, ngokubonakalayo nangokomzimba, unike ingxelo yokuba icandelo labucala lifumene ilahleko yemisebenzi, ukuncipha, ilahleko yomvuzo kushishino nakwinqanaba lesizwe, kunye nelahleko yotshintshiselwano lwangaphandle olusongela ulondolozo. Ngaphandle koku, urhwebo lwangaphakathi lubonakalise ukuba yi-ankile ethembekileyo ejongene nale mingeni.
Uye waphawula ukuba kukho ukutyelelwa kwabantu baseUganda kwiindawo ezahlukeneyo zokhenketho kubandakanya iipaki zelizwe, uMthombo weNayile, iilwandle, Uganda Iziko lemfundo yasendle noLondolozo lweZilwanyana zasendle (i-UWEC), iziqithi, kunye neziseko zofikelelo ngendlela efanayo ziye zaphucula ukuthambekela kokuhamba kunye notyalo-mali kwindawo yokuhlala kunye nemisebenzi yabakhenkethi phakathi kwezo ndawo zinomtsalane lukhula kancinci. Wongeze ukuba imfuno ixhaswa kukukhula komgangatho ophakathi, ukungena kwecandelo leshishini, kunye nenguqu ye-ICT eyenze ukuba ulwazi lufikeleleke ngakumbi.
“Abemi baseUganda abaninzi banengeniso yokubona kunye neendlela zokwandisa iiprofayili zabo zenkcitho. Ezi nzuzo zincomekayo zibonisa ithuba elingasetyenziswanga ubukhulu becala. Imfuno yokhenketho lwangaphakathi iqhutywa kukutyelela abahlobo nezalamane; imfuduko yasemaphandleni; iminyhadala yenkcubeko; kunye nemisitho equka ukuzalwa, imitshato, imisitho yokwaluka, njl.njl. Le mibhiyozo yimisitho ebophelelayo kuluntu lwethu, nemisitho yenkcubeko emva kokubuyiswa kwezikumkani zemveli nayo izise umdla ongakumbi oquka izikhumbuzo zokuthweswa isithsaba kunye notyelelo lweenkokeli zenkcubeko kwizifundo zazo,” watsho uPS.
Ubalule abanye abaqhubi bokhenketho lwasekhaya kubandakanya imisitho esekwe elukholweni, eyona idumileyo yiNamugongo Uganda Martyrs Pilgrimage yaminyaka le nge-3 kaJuni, iindibano zePentekoste, iinkomfa, inkuthazo, iindibano zocweyo kunye neentlanganiso eziye zaba sisixhobo esinamandla sokuhlanganisa intlalo noqoqosho kunye. abanye abaqhubi ezikhuthazayo ezizezi ukuhamba ngenxa yezizathu zonyango, ukuzonwabisa, ukuthenga, imfundo, kunye nophando.
Uye wancoma i-Master Card Foundation ngokuza kuxhasa icandelo lezokhenketho ukuze libuyele kwimeko yesiqhelo kunye nokomelela kwaye wabongoza iintloko zeshishini ezizimasa ngokwasemzimbeni nakwi-intanethi ukuba zamkele uhambo lwenkuthazo.
Isithethi esiphambili kunye neSiseko seCandelo laBucala e-Uganda (PSFU) UMlawuli oyiNtloko, uMlawuli uFrancis Kisirinya, uthe injongo yokubiza isidlo sakusasa kukulawula ukuhamba kwenkuthazo yeminyaka phakathi kwemibutho yamashishini kunye nabasebenzi baseUganda. Ekuthetheleleni kwakhe, uthe kungenxa yokuba yimibutho yamashishini kunye nabasebenzi bayo abanengeniso enokulahlwa enokuthi ibekwe kuhambo olukhuthazayo.
Uthembise ukuba i-PSFU iya kusebenza nzima ukuqinisekisa ukuba icandelo labucala linendawo efanelekileyo yoshishino ngokubhengezwa, ukuphembelela, kunye nophando lokukhula koshishino oluzinzileyo. Uthe icandelo lezokhenketho kunye nelokwamkela iindwendwe lelinye lamacandelo athe achaphazeleka kakhulu ngubhubhani we-COVID-19. Nangona kunjalo, ngoku eli candelo libona indlela ezinzileyo yokubuyela kwimeko yesiqhelo ngamanyathelo okubamba abekwe ngurhulumente.
Ngokwengxelo yeMTWA, ubhubhani we-COVID-19 ukhuthaze abantu baseUganda ababengakwazi ukuhamba ukutyelela iindawo ezinomtsalane kwilizwe labo. Phakathi kuka-Agasti 2020 kunye noMatshi ka-2021, ukhenketho lwasekhaya luphindaphindeke kathathu ukusuka kuma-21,000 ukuya kuma-62,000 abakhenkethi. Ukuhamba ngala manani, le projekthi inani eliphezulu kakhulu ukusuka kuMatshi ukuya kuDisemba kuthathelwa ingqalelo ishishini liya kwixesha eliphezulu.
Wachaza uhambo lweNkuthazo njengomvuzo okanye inkqubo yokunyaniseka ethatha indlela yohambo oluhlawulelwa zonke iindleko kunye neprogram yeziganeko ezicwangcisiweyo kunye nemisebenzi. Ngamashishini karhulumente nawabucala abandakanya uhambo olunika inkuthazo oluqaphela izibonelelo ezisukela kukunyaniseka okukhulu kubasebenzi, ubudlelwane beqela olomeleleyo phakathi komqeshi nabasebenzi, inkuthazo egciniweyo, ukubonelela ngeenjongo, ukhuphiswano olusempilweni emsebenzini, ukukhulisa ubuchule bomsebenzi kunye nemveliso, ukudala i inkcubeko yenkampani encomekayo, kunye nokwenza ishishini libe nomtsalane ngakumbi kubasebenzi.
Wongeze ukuba uhambo lwenkuthazo lunamandla amakhulu okutshintsha kwezoqoqosho kunye nentlalo kubasebenzi kunye noqoqosho olunokuthi lubandakanye ukukhula okuqinileyo kokusebenza kunye nokukhuthaza, ukudala ukukhula kokuthengisa okunokulinganiswa, kunye nembuyekezo kutyalo-mali. Ngokuzixhasa ngemali, ibonelela ngamava awodwa oontanga abahamba neenkokeli zenkampani ezisebenza ngakumbi kunaxa bezihambela bodwa. Ikwaxhasa ukukwazi ukulungelelanisa iinjongo zeshishini, iinjongo zomntu ngamnye, kunye nokwazisa ngophawu. Uphando olukhulayo lubonisa ukuba unxibelelwano lweemvakalelo kunye nophawu lunamandla ngakumbi kunezikhuthazi ezikhoyo zodwa eziqhuba iinzame zokuthengisa.
Ukuhamba ngenkuthazo nako kunempembelelo yezoqoqosho njengoko ukuhamba kuqoqosho olubuyelayo kuyimvuselelo enkulu yokuvuselela uqoqosho lwehlabathi njengoko iintlanganiso zobuso ngobuso zikhuthaza intsebenziswano kunye nonxibelelwano loluntu. Iihotele ezilungelelaniswe neefemu zolawulo lwendawo ekuyiwa kuzo zifumana imbuyekezo entle kutyalo-mali kunye nengqesho ethe ngqo kulutsha oluza nalo. Ngoko ke, ukhuthaze ii-CEO ezikhoyo kunye namasebe karhulumente ukuba abeke imigaqo-nkqubo ethi umzekelo ikhuthaze iIT kunye namasebe olawulo ahlala engahoywa.
Ucele urhulumente ukuba axhase ekuphuhliseni nasekuyileni izikhokelo zomgaqo-nkqubo woluhlu olubanzi lweemveliso zokhenketho ukukhuthaza ukhuphiswano kwimimandla yeentlanganiso, inkuthazo, iinkomfa kunye nemiboniso (MICE), ukhenketho lwezolimo, ukhenketho olusekelwe kuluntu, ukhenketho olusekelwe kwinkcubeko, ukhenketho lwenkolo, njl.
Ugxininiso kufuneka lubekwe kwiprofayili yoluhlu lwamava ukuze lufumaneke kubantu baseUganda kwaye luya kudala uphawu oluqinileyo lwesizwe kunye nokudala ukutolika okungaguqukiyo kwebali laseUganda kuluhlu lweemveliso zokhenketho kunye nokutyala imali kuphando lwemarike.
Ubulele iqabane lophuhliso kunye nomxhasi, iMaster Card Foundation, ngokuza nohlahlo lwabiwo-mali lwe-UGX32 yeebhiliyoni (US$ 8.98 yezigidi) eluphathise urhulumente kunye necandelo labucala. Oku kuxhobise amaziko ezempilo kunye ne-40,000 yeekiti zokuvavanya i-PCR, izixhobo zebhubhoratri kwi-Uganda National Bureau of Standards (UNBS) yokuqinisekisa imveliso, iibhedi zesibhedlele, izixhobo zokukhusela zomntu (PPEs), kunye nezixhobo zokukhusela.
Uqukumbele ngokubhengeza ukuba iPSFU ikwasebenzisana norhulumente ukuphuhlisa isicwangciso esitsha sophuhliso lwecandelo labucala ukuze siphume kwi-COVID-19, kwaye iphakheji ikwabandakanya isicwangciso sokubuyisela kunye nokwakha ukomelela kunye nesinye seziphumo yile ndibano yesidlo sakusasa. .
Encoma intetho kaKisirinya, uPeter Mwanje, RT weSahluko saseUganda, inkampani yabucala yenkuthazo, wathi ukongeza ukuba iinkqubo zokukhuthaza zinokubandakanya uxanduva lwentlalontle, umzekelo ukupeyinta ibhloko yesikolo, okanye ukuya nje kwigumbi lokuphumla, okanye elunxwemeni, okanye kwi-adrenaline. imisebenzi. Ucebise abakhenkethi ukuba benze idesika eyahlukileyo yokuhamba ngenkuthazo, kuba yahlukile kwiinkomfa.
Uphinde waphinda wagxininisa kwii-CEO ukuba iinkqubo zenkuthazo aziyi kuba nafuthe kuhlahlo lwabiwo-mali lwabo nangayiphi na indlela njengoko beza kusebenzisa kuphela ipesenti yengeniso efunyenwe kwingeniso egqithisileyo. Ibalelwa kwisi-7% sawo wonke umsebenzi wokhenketho loshishino olubalelwa kwi-US$75 yebhiliyoni kwihlabathi jikelele.
U-Pearl Horreau, uMongameli we-UTA, iqumrhu eliphambili lezokhenketho, ukhenketho, kunye necandelo lokwamkela iindwendwe, ubhenele kwi-CEO ukuba isebenzise ukhenketho lwasekhaya njengenye indlela yokukhuthaza abasebenzi babo ngokubavuza nangona iiholide ezihlawulelwayo ukuze zomeleze ubudlelwane kunye nokukhuthaza ukhenketho. ukuphucula imveliso emsebenzini.
Ezi nkcazo-ntetho zalandelwa yiseshoni yephaneli yabantu abadumileyo kushishino elawulwa nguMkomishinala woKhenketho weMTWA, uViviane Lyazi. Yayiquka iBhodi yezoKhenketho yaseUganda (UTB) uSekela-CEO uBradford Ochieng kunye noSihlalo woMbutho we Uganda Tour Operators (AUTO) kunye nelungu leBhodi le-PSFU, uCivy Tumusiime Ochieng, owathi i-Uganda lilizwe lesine elineentlobo ezahlukeneyo kwihlabathi ngokwenkcubeko. Uthe uphando olwenziwa yi-BBC ngo-2019 kubantu bangaphandle bafumanisa ukuba i-Uganda lelona lizwe linobuhlobo emhlabeni. Nangona kunjalo, uphononongo lokugqibela olukhuphisanayo lwesalathisi i-Uganda kwi-112 kumazwe ali-140. Ngokwempilo nococeko, ibiyi-136 kwi-140 eyingxaki enkulu. Ucebise ukuba kufuneka benze indawo yokusingwa kuqala ibe nomtsalane kwaye ibenokhuphiswano. UCivy Tumusiime ukhuthaze ii-CEO ukuba zingene kwinkqubo yebhendi yokhenketho lwasekhaya ngokukhuthaza abasebenzi babo kunye neentsapho zabo ngohambo lwasekhaya, njengoko abatsha bezakukhula beyamkela inkcubeko.
Iinkampani ezibonisayo ezivela kwicandelo labucala zibandakanya uMbutho weSizwe woBugcisa kunye neNkcubeko yeMisebenzi yaseUganda, iMurat Studios, iArlanda Tours kunye nokuHamba, iOrogu Tours, iPetnah Africa Tours, iVoyager African Safaris, iLets Go Travel, FCM Travel Solutions, Pristine Tours, Buffalo Safari Lodge, Papyrus Guest House, Park View Safari Lodge, Sites Travel, Gazelle Safaris, Gorilla Heights Lodge, Pinnacle Africa, MJ Safaris, Asante Mama, Go Africa Safaris, Maleng Travel, Talent Africa, kunye neToro Kingdom.
Novemba 12, 2021 kwi-06: 33
Kuhle ukubona iUganda igxile kwintengiso yasekhaya. Umkhenkethi wamazwe ngamazwe ufuna i-visa ukuze atyelele kwaye inkqubo ye-e-visa isagcwele iingxaki. Oku kufuneka kuqwalaselwe ngokukhawuleza.